Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Android Wear | Androidsis
Betsaka ny mpampiasa mampiasa ny fomba samihafa atolotry ny mpanamboatra smartphone anay haka sary. Ny ankamaroan'ny terminal dia mamela antsika haka pikantsary amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra volume down sy ny bokotra herinaratra miaraka. Amin'ny hafa, atao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fanombohana miaraka amina lakile hafa.
Raha maka pikantsary amin'ny terminal izahay matetika, na hizara taty aoriana na hitahiry sary na lahatsoratra, dia azo inoana fa raha manova ny terminal ianao, dia ho olana fanampiny izany, ny hahafantaranao indray ny fomba nakana ny efijery ny terminal. Soa ihany fa tsy misy izany amin'ny Wear OS, satria tsy navelan'ny Google hiditra ao ny mpamokatra.
Hatramin'ny nanombohan'ny Google ny Android Android Wear, fantatra amin'ny volana vitsivitsy toy ny Wear OS, dia noferan'ilay mpikaroka ny safidy manokana ho an'ireo fitaovana tantan'ity rafitra fiasa ity hatramin'ny farany, angamba noho ny fikasana tsy hisy fiantraikany amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny sosona manokana, zavatra iray izay indrisy mitohy mitranga amin'ny finday avo lenta.
Amin'izao fotoana izao, Google dia mamela ny mpamokatra hanisy ny diany fanaony ary tsy misy zavatra hafa. Tombony lehibe io izay tsy ahafahantsika mandray fanavaozana Android Wear haingana fotsiny, fa tsy mampihena ny interface amin'ny alàlan'ny sosona fanaingoana izay tena tsy misy ilana azy, satria amin'ity karazana fitaovana ity dia ny spheres no zava-dehibe.
Raha te haka pikantsary hizara amin'ny namanao ianao, na amin'ny sehatry ny anananao, na ny fizotranao tsy maintsy lalovanao mba hampavitrika na hanafoanana ny lahasa iray, dia hasehonay aminao ny fomba ahafahanay maka pikantsary amin'ny Android Wear. Marihina fa manan-kery io fizotrany io raha ampifandraisina amin'ny terminal tantanan'ny Android ny terminal fa tsy amin'ny iOS.
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Wear OS / Android Wear
Manokatra ny fampiharana Wear OS izahay aloha
Manaraka izany, mankamin'ny menio ambony atolotray teboka telo amin'ny toerana mijidina isika.
Ao anatin'ny menio aseho dia mifidy ny safidy Haka ny efijery famantaranandro isika
Ao amin'ny foibe fampandrenesana dia hiseho ilay safidy mamela antsika hizara ny fisamborana nataontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Android Wear
Ahoana ny fanovana DNS amin'ny Android raha tsy misy fampiharana fahatelo
Avereno jerena ny OUKITEL WP1